Nigranee | » पुरूषमा यौ’न क्षमता कति छ भन्ने कुरा यसरी थाहा पाउछन महिला पुरूषमा यौ’न क्षमता कति छ भन्ने कुरा यसरी थाहा पाउछन महिला – Nigranee
पुरूषमा यौ’न क्षमता कति छ भन्ने कुरा यसरी थाहा पाउछन महिला
निगरानी October 16, 2019 48
कुनैपनि पुरुषमा पुरुषत्व कति छ ? अर्थात् यौ’न क्षमता कति छ भन्ने कुरा महिलाले सुँघेरै थाहा पाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार आफ्नो प्रजनन चक्रको चरम सिमामा रहेका महिलाहरुले से’ क्स हर्मोनका कारण पुरुषका सरीरबाट आउने विशेष गन्ध सुँघेर पत्ता लगाउँछन् र टेष्टेस्टेरोन हर्मोन बढि भएका पुरुषप्रति बढि आकषिर्त हुन्छन् । अध्ययनका क्रममा पुरुषमा टेष्टेस्टेरोन र कोर्टिसोल हर्मोनको मात्राको आधारमा महिलाले मन पराउने गन्धको परीक्षण गरिएको थियो ।
त्यसपछि ती पुरुषहरुको सरीरबाट उनीहरुले लगाएका टिसर्ट फुकाली महिलाहरुलाई सुँघ्न दिइयो र कुन टिसर्टको गन्ध मन पर्यो ? परेन ? भनेर सोधियो साथै उनीहरु रजस्वला चक्रको कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा पनि सोधियो । शोधकर्ताहरुले टिसर्ट लगाउने पुरुषहरुको र्यालको नमूना लिएर हर्मोनको मात्रा समेत चेकजाँच गरे । नतिजाले के देखायो भने आफ्नो रजस्वला चक्रको पिक मा रहेका महिलाहरुले बढि हर्मोनयुक्त पुरुषले लगाएको टिसर्टको गन्ध मन पराए र त्यो टिसर्टको गन्ध मनलाग्दो, से’क्सी भएको जवाफ दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस : कसरी खुसी रहने? यस्ता छन् १४ उपाय
राम्रो बानीले खुसी रहन मद्दत गर्छ। त्यसो भए आफ्नो बानीमा परिवर्तन किन नगर्ने त ? सकारात्मक बानीलाई आफ्नो तालिकामा समावेश गर्नुस्। खुसी हुन सबैका आआफ्ना तरिका भए पनि उल्लेखित केही तरिकाहरु काम लाग्न सक्छन्।
मुस्कुराउनुस् : हामी खुसी हुँदा हाँस्ने गर्छौँ। हामी जब खुसी हुन्छौँ तब हाँस्छौँ। मुस्कुराउनु किन राम्रो हो भने यसले दिमागबाट डोपामिन नामक हार्मोन रिलिज गर्छ, जसले गर्दा हामी खुसी हुन्छौँ। हाँसोको मतलब बनावटी हाँसो होइन। हरेक बिहान ऐना अगाडि हाँस्ने अभ्यास गर्नुस्, खुसी हुन सिकिन्छ।
अरुको प्रशंसा गर्न सिक्नुस् : अध्ययनका अनुसार अरुलाई प्रशंसा गर्दा, दयाभाव देखाउँदा आफूलाई सन्तुष्टि दिन्छ। कसैैलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिँदा उसलाई पनि राम्रो महसुस हुन्छ भने तपाईंको खुसीको सीमा पनि बढ्छ तर प्रशंसा गर्दा पनि सम्मानित तरिकाले गर्नुस्। यदि तपाईंले कसैलाई शारीरिक आवरणबाट प्रतिक्रिया जनाइराख्नुहुन्छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्।
लामो श्वास फेर्ने अभ्यास गर्नुस् : आफूलाई संयमित राख्न लामो श्वास लिनुस्। लामो श्वासप्रश्वासको व्यायामहरुले चिन्ताबाट मुक्त गर्ने हार्भर्ड हेल्थ बताउँछ। आँखा बन्द गर्नुस्, आफूले मनपरेको राम्रो ठाउँ र यादगार सम्झना कल्पिनुस्। त्यसैगरी विस्तारै लामो श्वास नाक र मुखबाट लिनुस्। यो प्रक्रिया धेरै पटक गर्नुस्, तपाईंलाई शान्त महसुस हुन्छ। यदि तपाईं कुनै गाह्रो अवस्थासँग गुज्रिराख्नुभएको छ भने यो प्रक्रिया अपनाउन सक्नुहुन्छ।
बेखुसीको क्षण पनि स्वीकार्नुस् : सकरात्मक कुरा जहिल्यै पनि राम्रो हुन्छ तर जहिले पनि जीवनमा त्यही भइराख्छ भने हुन्न। सकारात्मक र नकारात्मक चिज जीवनको दुई पाटा हुन्। केही अशुभ समाचार छ या तपाईंले केही गल्ती गर्नुभएको छ भने जबर्जस्ती खुसी हुने प्रयत्न नगर्नुस्। आफूले गरेको गल्ती या बेखुसीलाई पनि स्वीकार्नुस्। नराम्रो क्षण या दुःखद क्षण कस्तो हुन्छ भनेर आत्मबोध गर्नुस् र यो मनन गर्नुस् कि, किन आफू दुःखी हुन पुगेँ र फेरि त्यो नदोहो¥याउने प्रयत्न नगर्नुस्।
डायरी या टिपोट गर्ने बानी बसाल्नुस् : लेख्नु आफ्ना विचार तथा भावना पोख्ने अनि प्लानहरु बनाउने राम्रो माध्यम हो। यसरी लेख्दा मन हल्का हुन्छ। लेख्नका लागि तपार्इं विद्धान वा एकदमै लेख्न जान्ने हुनुपर्छ भन्ने छैन। हरेक रात सुत्नुभन्दा पहिले केही न केही लेख्ने बानी बसाल्नुस्।
ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुस् : ध्यान गर्ने पनि विभिन्न उपाय छन्। अहिले अध्यामिकतामा पनि धेरै रुचि राख्ने गरिन्छ। तपाईंले समान्य ध्यान गर्नु सक्नुहुन्छ। ५ मिनेट शान्त भएर बस्नुस्, त्यो पनि ध्यान नै हो।
घुम्न निस्किनुस् : घुम्ने जाने साथी पाइराख्नुभएको छैन ? त्यसो भए एक्लै गइदिनुस्। एक्लै घुम्न जानुहुन्न भनेर कसले नियम बनाएको छ र ? आफ्नो मनपर्ने रेस्टुरेन्ट जानुस्, फिल्म हेर्न गइदिनुस् र आफूले जान चाहिरहेकोे ठाउँमा जानुस्। यदि तपाईं सामाजिक हुनुहुन्न भने आफू एक्लै भए पनि यस्ता क्रियाकलाप गरेर रमाउनुस्, यसले खुसी मिल्छ।
आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नुस् : सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नै हो। स्वस्थ्य भए खुसी रहन सकिन्छ। समयसमयमा चिकित्सकसँग शरीरको चेकजाँच गराउन आवश्यक छ।